Inona no maha samy hafa ny rivotra iainana finday sy ny cooler? | Lianchuang
Ny mari-panafody no fitaovana fampihenana be mpampiasa indrindra amin'ny fahavaratra. Raikitra matetika izy ireo. Mba hahamora azy, misy ny aircon et mobile amin'ny alàlan'ny rivotra, na ny iray amin'ireo dia raikitra. Ka inona ny fahasamihafana misy amin'ny aircon mobile sy ny aircon?
1. Inona no atao hoe «aircon» finday?
Ny aircon conditioner dia ny rivotra izay azo afindra amin'ny sitrapony. Misy compresseur, mpankafy fofonaina, heaters herinaratra, etona, etona mandrehitra vita amin'ny rivotra ary fitaovana hafa ao amin'ny vatana. Ny vatana dia ampiarahina amin'ny plug-pou ary ny chassis base dia misy casters. finday. Ny endrika ivelany dia lamaody, maivana ary mahay mandanjalanja.
2. Inona no atao hoe cooler rivotra?
Air cooler dia karazana fitaovana ao an-trano miaraka amin'ny maody fanana sy fampangatsiahana rivotra. Izy io dia manana andraikitra maro toy ny famatsian-drivotra, ny vata fampangatsiahana ary ny hamandoana. Ny fampiasana rano ho mpanelanelana dia afaka mandefa rivotra mangatsiaka ambanin'ny hafanan'ny efitrano na rivotra mafana. Ny ankamaroan'ny rivotra mangatsiaka dia manana sivana vovoka hanivanana ny rivotra. Raha misy sosona photocatalyst eo amin'ny sivana vovoka, dia mety hisy vokany sterilization ihany koa.
Fahatelo, ny fahasamihafana misy eo amin'ny rivotra sy finday
1. Ny maodelim-panafahana finday dia manana maodely kely sy volavola ary tsara sy mora entina. Ny aircon conditioner dia karazan-drivotra mandehandeha izay mamaky ny hevitra famolavolana nentim-paharazana, bitika, manana tahan'ny fahombiazan'ny angovo avo, ambany feo, tsy mila apetraka, ary azo apetraka amin'ny trano samy hafa araka izay itiavany azy.
2. Ny rivotra mangatsiaka dia mampiasa rano ho mpanelanelana ary afaka mamoaka rivotra mangatsiaka ambanin'ny hafanan'ny efitrano na rivotra mafana sy mando. Raha ampitahaina amin'ny mpankafy herinaratra, ny cooler de rivotra dia manana ny fiasan'ny rivotra madio sy ny fanalana fofona. Ny volo-drivotra dia tsy vitan'ny manakana ny metatra elektrika tsy ho solafaka, fa manana fahatsapana milamina sy mamelombelona ihany koa.
Fahefatra, izay tsara kokoa, rivotra iainana finday na rivotra iainana
1. Ny rivotra mangatsiaka dia afaka mampihena ny mari-pana amin'ny degre 5-6 eo ho eo noho ny mpankafy tsotra, manana fanjifana herinaratra ambany, tsy misy fiasan-dehumidification, ary mampitombo ny hamandoana ny rivotra rehefa ampiasaina, izay mety kokoa amin'ireo faritra manana toetr'andro somary maina. Ny fiantraikan'ny fanitsiana mari-pana dia mitovy amin'ny an'ny rivotra mahazatra mahazatra. Mazava ho azy fa afaka manitsy ny maripanan'ny rivotra anaty trano izy io, ary azo ovaina amin'ny hafanana samihafa arak'izay ilaina. Na izany aza, aorian'ny fampiasana azy dia tsy mitovy ny mari-pana an'habakabaka ao an-trano, izay mora miteraka aretina sy fikolokoloana. Mandritra izany fotoana izany dia lehibe ny herinaratra ary be ny fanjifana herinaratra.
2. Ny «aircon» finday dia mety amin'ny birao, ivelan'ny trano ary toerana hafa. Ny fanjifana herinaratra sy ny vidin'ny fividianana rivotra finday dia somary avo ihany.